Xiddigis - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay The Extrasolar Planets Encyclopaedia)
Muuqaalka xidigaha koonka.
Xidigaha, Galaagsiyada iyo Meereyaasha Koonka.
Xidigis (Af Ingiriis : Astronomy; Af carabi: علم الفلك) sidoo kale loo yaqaano Cilmi Fallag iyo Cilmiga Xidigaha waa cilmiga barshada Meereyaasha, Xidigaha, dayaxaanta, Galaagsiyada iyo dhamaan Koon eeynu ku noolnahay.
Cilmi Fallaga waa qeeyb ka mid ah Sayniska oo si toos ah u sharaxa barshada Koonka. Qofka aqoonta u leh Cilmi Falaga waxaa loo yaqaanaa Xidigisyahan (astronomer).
2 Taariikhdii Hore Islaamka iyo Ifbixii Cilmiga Falaga
3 Culimadii Laanta Xidigiska Ee Islaamka u Hano Qaaday
4 Bulshada Soomaalida iyo Adeegsiga Aqoonta Xidigiska
4.1 Magacyada Af Soomaaliga Ee Dhulalka
4.2 Ma Cirarbaa Mise Waa Dhulal?
4.3 Islaam 7 Cir & 7 Dhul
4.4 Waa dhulal ee cirar ma ahan
Xiddigisku waa cilmiga barashada xiddigaha, Meerayaasha, iyo wax allaale wixii dhacdooyin ah ee ka unkama wixii ka baxsan atmosfeerka dhulka. Waxaa lagu falanqeeyaa xidhiidhka ka dhexeeya meerayaasha, xiddigaha, iyo kawnka ka baxsan atmosfeerka hawada. Falanqayntaasi waxay noqon kartaa cimilada hawada, isbeddelka qaab dhismeedka kawnka, kimisteriga iyo fiisigiska walxahaas ku saabsan.
Culuunta xidigiska waxaa horumarkeeda ka mas'uul ah aqoonyahanadii u hana qaadey Dunida Islaamka. Waxaa sugan in Islaamka heer aad u sareeya uu gaarsiiyey waxa maanta ka jira badankii laamaha culuunta sida xisaabaadka, dawada, juquraafiga, ganacsiga iyo nidaamka beeca, sharciga, badmaaxa, abaabulka ciidamada xooga, falsafada, beeraha iyo caafimaadka bulshada. Xigasho qoraal oo laga akhristo kulyada Farsamada Bardera Polytechnic ee ku taal magaalada Baardheere ayaa waxaa lagu bixiyaa dersi ciwaankiisu yahay, Cilmi Fallaga iyo Barashada Islaamka.Qoon walboo adduunyadda ku nool waxay waxkaqoraan cilmiga xiddigiska markaad u fiirsato somalia reermiyiga markaad wareysato waxaad arkeysaa iyagoon heysan cilmiga tiknoligiyadda ee xoolahooda raacanaya ayey haddana waxkaaga sheegayaan xiddigaha iyo isbedelka hawada iyo guga deyrta iyo xagaaga
Taariikhdii Hore Islaamka iyo Ifbixii Cilmiga Falaga
Ummadii ugu horeysay ee karantiil ku joojisa faafid cudur waxay aheyd Muslimiintii deganaa dhulka Carabta. Cilmiga Alkami iyo laanta xisaabta ee Aljebra waxaa ay reer galbeedka buugaagta ku qoraan in Carabta laga dhaxley. Balse adeega iyo horumarinta intaas way ka dheereyd wayna ka baaxad wayneyd.
Taas annaga oo og, waxaan is waydiineynaa markii Maamulkii Islaamka uu sharfey barashada laamaha culuunta iyo wax walba oo aadanaha horumar u ah; dhibna aan gaarsiineyn diinta Islaama, maxaan ku kordhiney laanta Xidigiska ama barashada cilmi falaga?
Culimadii Laanta Xidigiska Ee Islaamka u Hano Qaaday
Falagyaqanada dunida Carabta ee magaca leh waxaa ka mid ah Yaquub Ibn Tariq, al-Kwarismi, al-Battaani, al-Farqani, al-Suufi, al-Biruni, al-Tusi iyo Cumar Khayyam. astronomy.htm Buugaag ay nimankaan qaar ka mid ah qoreen iyo faalooyin looga faaloonayo howshoodii ayaad heli kartaa haddii maktabada baarto.
Cilmiga xidigiska oo loogu magac daro Hooyada Sayniska, ayaa waxaa ka qeyb qaatay kobcintiina culimo xidis oo taariikhda Islaamka door weyn ku leh. Waxaana nimankaan ka mid ah Yaqub ibn Tariq, al-Battani, al-Sufi, al-Tusi kuwo kale. 
Nimankaan caanka ah qaaraankooda aqooneed wuxuu badankii ka soo jeeda laanta xisaabta laakiin xidigis qof aan xisaab aqoon ma baran karo kamana faaloon karo. Alifaad xogogaal, adeegsiga toorbinada ama diiradaha araga fog, iyo ururinta qoraal waxay u baahanyihiin maskax xisaab taqaan.
Dayaxgacmeedka iyo alaadaha wax cabira ee loo adeegsado barashada iyo u kuurgalka xidigiska iyo guud ahaan cilmiga falaga, shaki la'aan waxaa ku dheereeya reer galbeedka. Sidaas ayeyna arintu aheyd 100 sano wixii ka danbeeyay ee qarnigan. Balse aqoonta xidigiska waxay bilaabtey, gaar ahaan culimadii Islaamka ahaa waxay bilaabeen labo qarni ka dib bilowgii taariikhda Hirjada.
Bulshada Soomaalida iyo Adeegsiga Aqoonta Xidigiska
Dhanka Soomaalida iyo waxa ummadeena ay ka taqaan cilmiga xidiska iyo adeegsiiisa. Baaris dheeraad ah ayey u baahantahay sida reer miyiga maanta u adeegsadaan aqoontooda xidigiska.
Magacyada Af Soomaaliga Ee Dhulalka
Dusaa, Waxaraxir, Dhul, Farraare, Cirjeex, Raage, Uraano, Nebtuun, Buluuto
Haddii aad fiiriso qaamuuska Af Soomaaliga, waxaad arkaysaa in ummadeena oo reer miyi iyo ma akhristayaal u badan hadana inaan (dhulalal)ama meerayaasha ula baxney magacyo asal ah sida:
Waxaraxir (xidiga waabberi)
Cirjeex ama Cirjiir
IYO LABA DHULOO HADDA LA SOO ARKAY
Sidaad aragto, sagaal cir ayaa jira laakiin qoraalkaan diyaarintiisi baaris xigasho oo rasmi ah ma jirin. Reer galbeedka waxay yiraahdaan waa sagaal dhul ama (9 planets). Ka tuur labada dambe. Maxaad haysaa? Waxaad haysaa todobada "cir" ee culimadeenii ay kutubtooda ku qoreen qarniyo badan ka hor waana sida aan u naqaan Sabca Samawaat.
Ma Cirarbaa Mise Waa Dhulal?
Caqliga bini-Aadamkase haddii aad dhulka joogto, wax adiga kaa sareeyo dhul ma dhihi kartid caqliyan ee waxaad oran kartaa cirar. Waa sidaas falsafada Islaamka oo samooyin ayaa jira oo 7 (sabca samawaat ah)(wal arda) ee "dhulal" wax la yiraah ma jiraan. Oraahdan waa fikradii ay qabeen u kuurgalayaashii Islaamkii xiligii ay howshooda socotay. Waana sida aad ku arki karto kutubtii ay ka qoreen mowduucan.
Waxaa lagama maarmaan ah in fadhi ku haboon la helo si barashada iyo aqoonta gaar ee ay Soomaalida u leedahay cilmiga falaga la helo sida waax jaamacadeed iwm. Qoraalo kale oo waxaa jira raadraac ku samaynayo sida Soomaalida ay ugu xisaabtanto aqoonta aasaasiga ee cilmi fallaga.
Islaam 7 Cir & 7 Dhul
Baaris dheeraad ah iyo ku laabasho tafsiirka Qur'aanka ayaa cadeeyay in tiradu tahay 7 & 7. Rabbiga abuuragay kownkan cid kaga aqoon badan ma lahan. Suurada Dhalaaq aayada ugu dambaysa ayaa xaqiijisay jiritaanka Todoba Cir iyo Todoba Dhul. Qaybta hore ee aayada 12aad, "Ilaahay waa kan abuuray todoba cir oo dabaqdabaq ah dhulkana tira la eg..." haa
Waa dhulal ee cirar ma ahan
Waxa loo yaqaaan (ingriis: planets) waa dhulal. Haddii aan tusaale ahaan u soo qaadano luuqada ingiriiska ereyga "earth" waa dhul, dhulkana labo micnood ayuu yeeshaa oo waa dhulka guryaha laga dhisto ama waa midka meeraha ah ee qoraxda ku meereeysta. Erayga dhul laba micnood ayuu yeellan karaa. Markii aan hawada dhow aan ka baxno oo aan gaarno meesha daxay gacameedka gaaro markaas afarta dhinac waxaa naga xigaya cir. Cirkana waa isbeeyska afarta dhinac ka xiga dhulka. Marka aan dhulka joogno ma arki karno afarta dhinac ee cirka ah laakiin waxaan aragnaa qaybta sare kaliya. Dhulalka ama planet-yada mid midka kale ka sareeya ma leh ee kuligood waxay ku meereeystaan qorraxda wayna isla siman yihiin oo ayagoo simman ayey heehaabaan cirka.
Xidigiska Islaamka oo qoray Owen Gingerich: http://faculty.kfupm.edu.sa/PHYS/alshukri/PHYS215/Islamic_astronomy.htm
Culimada Islaamka ee culuunta xidigiska Door weyn ka qaatey http://www.ummah.net/astronomy/
↑ "Taariikhda Cilmi Fallaga"
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xiddigis&oldid=187754"
Bahda Midaysay Qoraxdu
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 Diseembar 2018, marka ee eheed 10:22.